ဝဋ် ကြွေး တွေ အမှန် တကယ် ပြေ စေ … ကြေ စေ ဖို့ ..ငြိမ်းစေဖို့ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » ၀ဋ် ကြွေး တွေ အမှန် တကယ် ပြေ စေ … ကြေ စေ ဖို့ ..ငြိမ်းစေဖို့
Posted by True Answer on Aug 28, 2011 in Creative Writing, Think Different |4comments
သဲအင်းဂူဆရာတော်ကြီးမှ ခန္ဓာဖြင့်သာ ၀ဋ်ကြွေးများပေးဆပ်ရပါက ကျွန်တော်တို့တတွေ စားခဲ့သော ငါးခြောက်ပြား ကြီးများ ဘ၀လည်း တချိန်တွင် ပြန်ရောက်ကာ ပြန်လည်အစားခံရဦးမည်။ ဟု ဟောကြားထားလေသည်။
မိုးကုတ်ဆရာတော်ကြီးမှလည်း အရိုးတွေ တောင်လိုပုံအောင် ခန္ဓာဖြင့် ဘ၀ပေါင်းများစွာ ပေးဆပ်ခဲ့ပြီးသော်လည်း အဆုံးမရှိနိုင်သေး ဟု ဆုံးမပါသည်။
အဆိုပါ ၀ဋ်ကြွေးများကို အမှန်တကယ် ပြေစေ ကြေစေလိုပါက ”ငါ(သူ)ကောင်းတာလုပ်လျှင် ငါ(သူ)ခံရတယ်။ ငါ(သူ)မကောင်းတာလုပ်လျှင် ငါ(သူ)မကောင်းတာခံရတယ်။” ဆိုသော ငါ(သူ) ပုဂ္ဂိုလ် သတ္တ၀ါ ရှုထောင့်ထက် ပိုမို ကျော်လွန်ကာ လေးလေးနက်နက် နားလည်ဖို့လိုအပ်ပါသည်။
(၀ဋ် ဆိုသည် ထပ်ကာထပ်ကာ ဖြစ်နေတယ်လို့ …) နားလည်ရပါမည်။
ဆုပ်ကိုင်လို့ မရတဲ့ ၊ အတည်ယူလို့မရတဲ့ တသမတ်တည်းသော ဖောက်ပြန်ပျက်စီးမှု (ဒုက္ခသစ္စာ) အမှန်တရားပဲ တကယ်ဖြစ်နေတာကို နားမလည်သောကြောင့် မသိသောကြာင့် (အ၀ိဇ္ဖာကြောင့်) …………
ခ) ကမ္မ၀ဋ် (၂) ပါးရှိပါသည်။
တသမတ်တည်းသော ဖောက်ပြန်ပျက်စီးမှု (ဒုက္ခသစ္စာ) သည် ရှေ့က ပျက်စိးနှင့်ခဲ့ပြီးသော မရှိတော့သည် ပျက်စီးမှုခဲ့မှုအရှိန်များကို အရှိလုပ်လျှက်
ဂ) ၀ိပါက၀ဋ် (၈)ပါး ရှိပါသည်။
၈) မရဏ (သေခြင်း၊ သဘောကိုဆောင်သည့် ဖောက်ပြန်ပျက်စီးနေမှု ) တို့ မဆုံးနိုင်ဖြစ်ကြရလေသည်။
ကိလေသ၀ဋ် သုံး ပါး နှင့် ကမ္မ၀ဋ် နှစ်ပါးကို သမုဒယသစ္စာ ဟု ဖြစ်ပါသည်။
၀ိပါက၀ဋ်ရှစ်ပါးသည်ကား ဒုက္ခသစ္စာ ဖြစ်ပါသည်။
ကျေးဇူးပါဘဲ true answerရေ။တရက်တရက် အလုပ်နဲ့ အိမ် လုံးချာလိုက်နေတော့ ဘာမှ တရားဓမ္မနဲ့ ပတ်သက်လို့ ဗဟုသုတရယ်မတိုးပါဘူး။နောက်လဲဝေမျှပေးပါနော့။
Thanks for sharing this good post,frd!
Clear and precise explanation of ”၀ဋ်သုံးပါး” and its circle.Before I don’t understand that clearly,but now,I do well.Yes,we should realize all these are changing and destroying all the time without any attempt done by someone or something.
အောင်မလေးနော် ဘာမှကိုမရေးလိုက်ရသေးပါဘူး။သွားလေရာအနှတ်လိုက်ပေးနေကြပါလားနော်။ငါ့မလဲ တရားစာလေးဝင်ဖတ်ပြီး မန့် တာတောင် မှအနှတ်နဲ့ ကရေစက်မကုန်ပါလား
ဒါကြောင့်လည်း ဖြစ်ပျက်မြင်တဲ့ညဏ်၊ နည်းလမ်းမှန်စွာ ရှုမှတ်ပွားနေမှုကို အားအကောင်းဆုံး ကုသိုလ်ဖြည့်ဆည်းပွားများခြင်းလို့ အရိယာများပြောခဲ့တာပေါ့…။